အဖ အရေးပိုင်၊ ဒုတိယကော်မစ်ရှင်နာမင်းကြီး ဦးဖိန်း (ကေအက်စ်အမ်၊ အေတီအမ်) နှင့် အမိ ဒေါ်မိမိ တို့မှ မြင်းခြံမြို့တွင် ၁၉၀၀ ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့၌ ဖွားမြင်သည်။
မွေးချင်း ခုနစ်ယောက်ရှိသည်။ ထိုမွေးချင်းများမှာ- ပထမဆုံး နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးတင်ထွဋ် (b. ၁၈၉၅ - d. ၁၉၄၈)၊ တရားလွှတ်တော်ချုပ် တရားသူကြီး ဦးကျော်မြင့်၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ ပထမဆုံးပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာထင်အောင် ( b. ၁၉၀၉ - d. ၁၉၇၈) တို့ဖြစ်ပြီး ဦးမြင့်သိန်းအပါအဝင် ညီအစ်ကို ၄ ဦးစလုံးမှာ အင်္ဂလန်မှ ဘားအက်လော (Bar-at-Law) ဝတ်လုံဘွဲ့များရ၍ ထူးချွန်ထက်မြက် ထင်ရှားသူများ ဖြစ်ကြသည်။ ညီမသုံးဦးအနက် အကြီးဆုံးဒေါ်မြမူမှာ မြန်မာစာပါမောက္ခ ဦးဧမောင်၏ဇနီး ဖြစ်၍ အလတ် ဒေါ်ခင်စောမူမှာ အိုင်စီအက်စ် ဦးဘတင့်၏ဇနီး ဖြစ်သည်။ အငယ်ဆုံး ဒေါ်တင်စောမူမှာ အင်္ဂလိပ်စာပါမောက္ခ ဖြစ်သည်။ ဦးဖိန်းသည် အလွန်အရပ်နိမ့်သော်လည်း သူ၏အရည်အချင်းနှင့် ဝီရိယမှာ လွန်စွာမြင့်မားသည်။ ၎င်း၏ သား လေးယောက်နှင့် သမီး သုံးယောက်စလုံးမှာ ပညာထူးချွန်ပြီး မြန်မာပြည်တွင် လွန်စွာထင်ရှားလာခဲ့သည်။
၁၉၅ဝ ပြည့်နှစ် ဇွန်လတွင် ပီကင်းသို့ ပထမဦးဆုံးသော မြန်မာသံအမတ်ကြီးအဖြစ် ဦးမြင့်သိန်းသည် ထပ်မံစေလွှတ်ခြင်းခံရသည်။ ၁၉၅၂ ခုနှစ်ကုန် အထိ ပီကင်းသံရုံး၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ဦးမြင့်သိန်းသည် ချန်ကေရှိတ် အမျိုးသားအစိုးရလက်ထက်သာမက မော်စီတုံးအစိုးရလက်ထက်၌ပင် စေလွှတ်ခြင်းခံရသည့် ထူးခြားသောသံအမတ်ကြီး ဖြစ်သည်။
ပြည်တော်ပြန်ပြီးနောက် တရားလွှတ်တော်ချုပ်၌ တရားဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည်။ များမကြာမီ တရားလွှတ်တော်ချုပ် တရားဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်လာသည်။
ဦးမြင့်သိန်းသည် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး စဝ်ခွန်ချို၊ အခြားစော်ဘွားတို့နှင့် ခင်မင်ရင်းနှီး၍ နွေရာသီချိန် တောင်ကြီး ကလောမြို့များ၌ တွေ့ဆုံလေ့ရှိသည်။ မြို့မဟောင်းကြီးများ၊ တရားရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနေအိမ်သို့လည်း သွားရောက်လည်ပတ်လေ့ရှိသည်။ အသက်အရွယ်ကြီးသည့်တိုင်အောင် မှတ်ဉာဏ်ကောင်းသည်ဟု ဆိုကြသည်။
↑ သမိုင်းပြုစုရေးအဖွဲ့ (၂၀၁၂)။ မြို့မအမျိုးသားကျောင်းသမိုင်း။ ဒဂုံမြို့နယ်: ဦးစိုးဝင်း (မြို့မကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများအသင်းဥက္ကဋ္ဌ)။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြင့်သိန်း&oldid=699379" မှ ရယူရန်
၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၄:၀၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၄:၀၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။